Soomaali ka badan 900 oo ku xiran xabsiyo ku yaalla gudaha dalka Itoobiya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Soomaali ka badan 900 oo ku xiran xabsiyo ku yaalla gudaha dalka Itoobiya
Xabsiyo ku yaalla gudaha dalka Itoobiya, gaar ahaan magaalooyinka Jigjiga iyo Godey ayaa lagu soo waramayaa iney ku xiran yihiin dad Soomaaliyeed oo tiro ahaan ka badan 900, kuwaasi oo ay xireen ciidamada Liyuu Boolis ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar oo kamid ah Mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa mar uu saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in dadkaan xiran ay isugu jiraan dhallinyaro, waayeel iyo sidoo kale haween.
Dadkaan ayuu xildhibaanka sheegay, in badi ay xiran yihiin ku dhawaad Labo Sano, illaa iyo haatanna aaney helin wax caddaalad ah.
Sidoo kale, xildhibaan Dhaqtar ayaa sheegay in dadkaan laga xiray gudaha dalka Soomaaliya, kadib markii ay soo galeen ciidamada Liyuu Boolis, isaga oo dhanka kalena sheegay in dadkaan qaarkood yihiin beeraley, xoolo dhaqato, ganacsato iyo macallimiin.
“Ciidamada Liyuu Boolis ayaa dadkaan ku xiray Jigjiga iyo Godey, waa la jirdilaa, caddaalad ma haystaan, ku dhawaad labo sano bay xiran yihiin, markii la xiraayeyna dalkaan dowlad baa ka jirtay cidna kama hadal” Ayuu yiri xildhibaan Idiris.
Ugu dambeyn, xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo, in sida ugu dhaqsiyaha badan ay dhexda ugu xirato sidii dowladda Itoobiya uga soo deyn laheyd muwaadiniintan Soomaaliyeed.